कोरोनाबाट थप १३९ को मृत्यु,स्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको तयारी - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
चैतको अन्तिम सातायता कोरोनाबाट ८ सय ६५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण हवात्तै बढेपछि समुदायमा रहेका वृद्ध, दीर्घरोगी र धेरै रोग भएका व्यक्तिको मृत्यु भएको केन्द्रका प्रमुख डा. पौडेलको दाबी छ। चिकित्सकले भने अस्पतालमा आइपुगेका बिरामीको समेत कोभिड निमोनियामा चाहिने आवश्यक अक्सिजन तथा हेरचाहको अभावमा मृत्यु हुने गरेको जनाएका छन्। वीर अस्पतालका फिजिसियन डा. धु्रव गैरेका अनुसार अस्पतालमा पुगेका ९० प्रतिशत बिरामी अक्सिजन चाहिने र धेरै आइसियु चाहिने अवस्थाका छन्। अक्सिजन र आइसियु दुवै नपुगेपछि उनीहरूको कुर्दाकुर्दै मृत्यु हुन्छ। यसरी मृत्यु हुनेमा रोग नभएका युवासमेत छन्।
कोभिडले छोटो अवधिमै कडा निमोनिया बनाएर मृत्यु भएको उनले बताए। निमोनिया भएका बिरामीका लागि अस्पतालमा पर्याप्त अक्सिजन र आइसियु छैनन्। कोभिडको सुरुकै अवस्थामा अस्पताल पुगेमा धेरैलाई बचाउन सकिन्छ। कोभिड १९ नयाँ भेरियन्ट संक्रमण भएको ५ देखि ७ दिनभित्रमा निमोनिया हुन्छ। यो चरणमै अस्पताल पुगेर आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराएमा, खोकी, ज्वरोको लक्षण देखिन थालेको दुईतीन दिनमै स्वास्थ्यकर्मीको सुझावमा मात्र औषधी सेवन गरेमा धेरैलाई संक्रमणबाट बचाउन सकिने वीर अस्पतालका फिजिसियन डा. गैरे बताउँछन्। उनका अनुसार सुरुमै उच्च ज्वरो र अक्सिजन घट्न थालेको अवस्थामा स्टेरोइड औषधिले पनि निमोनियाँ घटाउनमा सहयोग गर्छ। त्यसैगरी कोरोनाको लक्षण देखिएमा छातीको एक्सरे गरेर निमोनियाँ भए/नभएको हेरेमा समयमै उपचार गर्न सकिन्छ। निमोनिया नभएको अवस्थामा ज्वरो घटाउन सिटामोल सेवन गर्न सकिन्छ।